“Bartilmaameedkeyga KOOWAAD ee Xilli ciyaareedkan waa inaan….”.-Maxamed Saalax oo hadlay – Gool FM
“Bartilmaameedkeyga KOOWAAD ee Xilli ciyaareedkan waa inaan….”.-Maxamed Saalax oo hadlay
Byare December 2, 2018
(England) 02 Dis 2018. Maxamed Saalax ayaa daaha ka rogay bartilmaameedkiisa koowaad ee kal ciyaareedkan xilli ay caawa Liverpool kulanka Merseyside derby ku wajihi doonto naadiga Everton.
Wiilka reer Masar ayaa sheegay in hadafkiisa koowaad ee xilli ciyaareedkan uu yahay inuu ku guuleysto Premier League iyadoo ay jirto inay 5-dhibcood u jiraan Manchester City balse uu u harsan yahay kulanka caawa.
“Bartilmaameedkeyga kal ciyaareedkii tagay ma ahayn oo kaliya inaan Jabiyo Rikoodhka, balse wuxuu sidoo kale ahaa inaan wax uun kula guuleysto kooxda,” Saalax ayaa sidaa u sheegay Sky Sports.
“Aad ayaan ugu dhaweyn Champions League Final kii, balse tani waa kubbada cagta waa inaad aqbashaa natiijada.
“Kolkan, kama hadli karo abaal marinadeeda shaqsi ahaaneed, waxaan jeclaan lahaa inaan dhoho dhammaadka xilli ciyaareedka, laakiin bartilmaameedkeyga koowaad waa inaan wax kula guuleysto kooxda.
“Wax wayn ayay noo noqon doontaa aniga koox ahaan Iyo ka ciyaartooy ahaan, sidaa darteed sidoo kale waa Riyo ay leedahay magaalada, ciyaartoyda Iyo taageerayaasha, sidaa darteed waxaan filayaa inaan wax sameyn doono kal ciyaareedkan.
“Aniga ahaanteyda waxaan doonayaa inaan noqdo horyaalka Premier League.
“Kulankii ugu dambeeyay waxaan ku ciyaarnay guriga may 12, durba waan ogyahay wax kasta oo iyada ku saabsan, sidaa darteed si adag ayaan u dagaalami doonaa si aan ugu guuleysano Premier League.
“Maalinka ugu dambeeya kal ciyaareedka waxaan rajeenayaa inaan noqono horyaalka Premier League.”.
Shaxda rasmiga ah kulanka adag kooxaha Liverpool Vs Everton